Ngisho novice beekeeper njalo ukuhlukanisa kwesibeletho kusuka bee ukusebenza. Yenza kube lula ngokuphelele. Lokhu zesifazane main esidlekeni, ophilayo isikhathi eside kunaleso izinyosi abavamile. Kuyinto ezimbili kubuye ngasikhatsi tibe tintsatfu ngezikhathi eziphindwe kanye, ngokungafani yokugcina has a ephelele uhlelo zokuzala. On kanjani uyoba evundile, kuncike ngokuqondile amandla umndeni.
Ngo esidlekeni, yena wenza omunye umsebenzi olulodwa - kwenza kubekwa amaqanda, okuyinto kamuva avele drones kanye nabantu abasebenza. Ngo nenkathi nje owodwa angakwazi ikusebenzise 120 -. Ayizinkulungwane 200 kwesibeletho elula zinyosi esidlekeni futhi awuyeka kuphela ukuze kuhlangatshezwane drones. Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo ukuthi kungaba isikhathi eside ukugcina ngaphakathi uketshezi kwesidoda, uyisebenzisa kancane kancane amaqanda abaningi.
Ngokusebenza-ke kuyinto yokuqala 2 iminyaka yokuphila kwakhe. Zonke isikhathi izalela amaqanda wakhe, naye ukunakekela ngokukhethekile kokwengamela suite - izinyosi eziyizisebenzi. Yomiselela queens ngokuvamile enziwa ngomnyaka wesithathu, kodwa yebo, kuphela uma lincipha izinga umkhiqizo wabo. Kufanele uqale ahlole esidlekeni. proizvoditelnitsa Young izalela amaqanda wonke amaseli zilandelana. Old noma ogulayo imigqomo kubo. Uma lokhu kubonakala, proizvoditelnitsu kumelwe ithathelwe.
Kwesibeletho bee ongabeka ezimbili kuphela izinhlobo amaqanda - avundiswa kusukela lapho abasebenzi kanye nezinye ngabanye kwesibeletho, futhi nenzalo, zazo ezibheke drones kamuva. Isisebenzi izinyosi ukuhlanza wakhe futhi sidla impova nojeli. Ukuya cell, indlovukazi okuthunyelwa isisu sakhe futhi izalela iqanda ezincane side. Nokho, ngaso sonke isikhathi yenza Nokuhlola kokuqala - kahle kanjani bahlanza esizayo izibungu yokuhlala.
Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi bee indlovukazi, isithombe ongawabona ngezansi, ubulawa. Lena avame ukuba asolwe yena beekeeper. Angaba sinyathele ngesikhathi sokuhlolwa esidlekeni, noma ngokubamba uzimele akuyona phezu kwalo, udedele kwesibeletho emhlabathini, lapho kuba isikhathi esifushane befa. Kulokhu bee ngemva 6 - 8 amahora kuyakhethwa kanye izibungu ambalwa uqale fatten kubo jelly kanzima. Amaseli, lapho ziba, ukungezelela nokuhlathulula ukwakhela.
Izinyosi kwesibeletho ngabakhulisa ngale ndlela ibizwa ngokuthi fistula. Ezimweni eziningi, lezi kwafana proizvoditelnitsy ezibhuzayo. Nokho, uma izinyosi ungakhethi usuku olulodwa-futhi ezintathu nane-bot kuwo ngeke esibelethweni izinga ezimbi. Umndeni kungenteka uhlushwe kakhulu kuleli. Phakathi naleso sikhathi, uma uthanda, kusuka engase eliphansi izimvukazi isidleke kungenziwa ikhishwe. Ukuze wenze lokhu, ususe wonke indlovukazi emangqamuzaneni okuthiwa niye naphawulelwa ezinsukwini ezine ngemva laying.
Ukuqala ukuhoxiswa izinyosi entsha proizvoditelnitsy kufanele azame ungalahlekelwa. Iqiniso lokuthi izinyosi ezine-indlovukazi kuyophuma ngokushesha futhi ngokushesha abhubhise bonke ngosuku. Kuphela emndenini kokusebenza abantu enamandla kakhulu awavunyelwe wakhe kule. Kulokhu, lo eziswebezelayo kwenzeka futhi kanye uswebezane yizimpukane bese isibeletho embi kakhulu. Proizvoditelnitsa izimpukane ukuphuma esidlekeni izikhathi eziningana kuze kube yilapho umngane womshado nge drones.
Lokhu akusho kwenzeke kuphela uma uma ngaphandle nemvula. Ngesikhathi yayo izinsuku okukhulu kuka-20, indlovukazi uqala amaqanda angawomlomo nje lana. amaseli Drone ukuhlukanisa amangqamuzana lezinyosi ukusebenza ilula: banayo cap convex. Ngokufana kwesibeletho, okuthiwa futhi irobhothi, kuyodingeka esikhundleni ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Utamatisi sigqoka ekhanyayo sokuchuma kangcono izithombo
Uma umnotho babe amaphuphu day ubudala, ukwedlula ukondla amachwane?